Samsung terminal တွင် rom မထည့်မီမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း Androidsis
Samsung Terminal တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော rom ထည့်ရန်လိုအပ်ချက်များ
Francisco Ruiz | | ရွမ်, Samsung, လုံခွုံရေး
ကွဲပြားခြားနားသောဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်မှတ်ချက်မျိုးစုံပေးထားခြင်း၊ အထူးသဖြင့် Samsung ဆိပ်ကမ်းအသုံးပြုသူများက, ငါသည်ဤဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် must - ဖတ်လမ်းညွှန်, စနစ်တကျချက်ပြုတ်ထားတဲ့ rom ထည့်သွင်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တွေ။
ငါပြောရမည်မှာဤအကြံပြုချက်များသည် terminal အသုံးပြုသူများအတွက်သက်ဆိုင်သည် Samsungသူများကဲ့သို့ အခြားမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်.
ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် အမြစ်တွယ် သူနှင့်အတူ ClokWorkMod ပြန်လည်ထူထောင်ရေး o ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူ တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်၊ ဤသည် terminal တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်းသည်မတူညီသော Android terminals များအတွက်မည်သည့်ဆောင်းပါးများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ပြီးတာနဲ့ငါတို့ terminal ကိုရှိသည် အမြစ်တွယ်နှင့်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်အတူ ထည့်သွင်းထားပါက backup သို့မဟုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် nandroid အရန်သိမ်းခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ system တစ်ခုလုံး၏၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကကဲ့သို့ပြန်လည်ရယူရန်မကောင်းသောလျှပ်တပြက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် backup လုပ်ထား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ကိုကနေ EFS နဲ၎င်းသည် root ၏အတွင်းပိုင်းတွင်တွေ့ရသော folder တစ်ခုဖြစ်သည် စနစ်ဖိုင်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ IMEI, MAC နှင့် Bluetooth လိပ်စာနှင့် terminal တစ်ခုစီ၏အခြားထူးခြားသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်း၏။
ဖိုင်တွဲအရန်ကူးရန် EFS နဲ Command တွေကိုသုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် terminal emulator ကို, သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သော root file explorer နှင့်အတူ အမြစ် Explorer ကို o ES ဖိုင်မန်နေဂျာ.
ဤဖိုင်တွဲ၏မိတ္တူကူးခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာတစ်ခါတစ်ရံ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၌ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် roms, ဒီဖိုင်တွဲနိုင်ပါတယ် ကိုဖယ်ရှားသို့ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြေခံအကျဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုပင်အသုံးမပြုနိုင်သည့် terminal တစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတိရဖို့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု၊ အထူးသဖြင့်သုံးစွဲသူများအတွက် Samsung ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ rom flash လုပ်ချင်တယ် ICS o ဂျယ်လီစေ့, rom ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် flash လုပ်တဲ့အခါ၊ ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်တို့ကို install လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ် kernel အသစ်သည် Rom နှင့်တွဲဖက်ပြီးပထမဆုံး flash ၌တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ rom ကိုချန်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုတစ် ဦး ၌တည်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့သိလိမ့်မည် စဉ်ဆက်မပြတ်ကွင်းဆက်, ဒါမှမဟုတ်၏ကန ဦး မျက်နှာပြင်၌တည်၏ boot, ဒါမှမဟုတ်အသစ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ kernel ထည့်သွင်းထားသည် အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပဲလိုတယ် Recovery ကိုပြန်လည်ရိုက်ထည့်ပါ နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခြေလှမ်းကနေအောက်ပါ, rom flashing ဆက်လက် sdcard မှ zip ကို Install လုပ်ပါမဆိုသုတ်လုပ်ဖို့မလိုဘဲ။
ဤနောက်ဆုံးပြproblemနာသည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်လူအများစုမှတ်ချက်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ လူအများက၎င်းသည်မကောင်းသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှုတ်ခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဆိပ်ကမ်းများပြန်လည်ထူထောင်ရန်အစုစပ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် မူရင်း firmware များကိုပြန်လည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, rom ၏ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်အလုံအလောက်အခါ။
ဖော်ပြပြီးသောအကြံဥာဏ်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိရမည်ကိုသတိရသင့်သည် ဘက်ထရီ ပစ္စည်း အားအပြည့်သွင်းထားပြီးပြီ အဖြစ် USB debugging enabled flashed ခံရဖို့ device ရဲ့ settings menu ကနေ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Galaxy S အတွက် Elite Team Jelly Bean Rom ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Terminal တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော rom ထည့်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူ root explorer (သို့) ef explorer ဖြင့်အမြစ်တွယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖိုလ်ဒါကိုလမ်းကြောင်းထဲ၌သင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၊ အရန်ကူးယူပြီးပါက ROM အသစ်ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းအရံသိမ်းဆည်းမှုကိုဤ ROM အသစ်သို့ပြန်ယူနိုင်သလား။
Big Launcher 2.0, သင့် Android ကိုလွယ်ကူစွာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ